ओलीलाई अर्को संकट ! – Khabarhouse
ओलीलाई अर्को संकट !
Khabar house | १७ फाल्गुन २०७६, शनिबार १०:०२ | Comments
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीका विश्वासपात्रहरु एकपछि अर्को गरेर वि’वादमा मु’छिन थालेका छन् । केही समय अघि मात्रै ७० करोडको क’मिशन डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्रीबाट ओलीको विश्वास पात्र गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले राजीनामा दिए । त्यसको एक साता नबित्दै अर्का विश्वासिला पात्र प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई माथि मु’द्दा परेको छ ।
मुख्यमन्त्री राईमाथि अंश मु’द्दा दायर भएपछि राजनीतिक माहोल तातिएको छ। शुक्रबार दिउँसो काठमाडौं जिल्ला अदालतमा एउटा मु’द्दा दायर भएको छ। त्यो अंश मु’द्दा हो जसमा प्रदेश नम्बर एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई वि’पक्षी बनाइएको छ। बालिका खड्का नाम गरेकी महिलाले शेरधन राईलाई पति दा’बी गर्दै मु’द्दा दायर गरेकी हुन् । राईले आफूसँग विवाह गरेको दा’बी गर्दै घरेलु हिंसाको अ’भियोग समेत लगाएकी छिन् ।
खड्काले आफूले अंश पाउनु पर्ने उल्लेख गरेकी छिन् । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटस्थ मानिएकाहरु एकपछि अर्को वि’वादमा आइरहँदा राई माथि मु’द्दा दायर हुनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । योसँगै राईलाई तत्काल पदबाट राजीनामा दिन पनि पार्टी भित्रैबाट आवाज उठेको छ । स्रोतका अनुसार नेकपा भित्र पनि पूर्व एमाले खेमाकै नेताहरु भीम आचार्य र कृपाशुर शेर्पाहरुले आरोप लागेर मु’द्दा दर्ता भैसकेपछि राईले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठाएका छन् ।